musha nyika dzakabatana Hollywood nyeredzi Peter Dinklage Kubata Vana Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inotaura Nhoroondo Yese yeAmerican muimbi uye mufirimu wefirimu anozivikanwa zvikuru nezita rezita rezita "The Imp". Yedu Peter Dinklage Yemwana Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nhoroondo yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri / kumashure uye akawanda OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvemunhu wake anonakidza, akachenjera uye ane njere seTyrion Lannister mune HBO uterevhizheni mutsara Game of Thrones. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Peter Dinklage's Bio iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Peter Dinklage Kubata Vana Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Peter Dinklage akaberekwa musi we11th musi waJune muna Morristown, New Jersey. Akaberekerwa nababa vake John Carl Dinklage (mutengesi wezvitengesi) uye kuna mai vake Dinklage, (mudzidzisi wepurokoro yechikoro).
Kukura muMorristown, wechidiki Petro ndiye kushungurudza kwemaziso nokuda kwezvikonzero zvisipo kure nemuvakidhi wake chaiwo. Vakawanda vangangoshamisika kuti vabereki vake vaive vehuwandu hwehurefu vangabereke sei mwana uyo akave ari wekutanga mutsa wake muguta.
Hazvina kutora nguva refu mudiki Peter asati aziva kuti chimwe chinhu chakange chisina kunaka pamusoro pake kutonga kubva pane izvo zvaaifunga sekutarisirwa kusingakoshe vanhu vanhu vakamupa kusvika padanho rinogumbura. Rudzi urwu rwekutarisisa haruna kutakurwa nehushingi kana hushingi zvikonzero asi zvekukatyamara zvinokwira zvichibva mumagene.
Peter Dinklage Kubata Vana Nhau Plus Untold Biography Facts: Sad Discovery
Aida kuziva kuti chii chakanga chisina kunaka nechekuvaka kwake Petro wechidiki akabvunza kubva kuvabereki vake kuziva kana zvaaiva nazvo yaiva chikamu chinopfuura kana chirema chaaizofanira kushivirira muupenyu hwake hwose. Akavhiringidzika kuziva kuti zvaaiva nazvo zvaive achondroplasia, ruzivo rwechimiro chinokanganisa mafupa.
Kune wechidiki Petro, Kuwana chirwere chinosuruvara kunobvuma kubvumirwa asi kubvuma kwake kwakanga kusina kunaka pakutanga. Pasinei nokuti akaedza zvakaoma sei, akawana kukura kunonetsa, dambudziko akarondedzera kuna MSNBC kubvuma kuti:
“Sekuyaruka, ndaive nehasha uye ndakashatirwa, uye ndakasimudza madziro aya, asi kana uchinge wakura waunoona, unoona kuti unongofanirwa kuseka. Munongozivawo kuti harisi dambudziko rako. Ndezvavo. ”
Peter Dinklage Kubata Vana Nhau Plus Untold Biography Facts: Mavambo Okutanga
Kuzadzisa chikamu chokugamuchirwa peter akasarudza kusarega kubata kwake kwepanyama kuchikanganisa maonero aanoona hupenyu kana kuti kutora chiyero chaanogona kudya nacho. Akave akasununguka nehupenyu hunoita kuti kuzvidzora kwezvido zvake pamusoro pehutano hwake kwaiva nyore sezvinongoita sarakeless runyararo ruchidzika kuburuka.
Mukuwedzera, haana kuzova munhu asingabatsiri wekutarisa asi uyo akaisa pfungwa dzevamwe kwaari kuburikidza nekupa mimhanzi yemapopotera kumunharaunda (pamwe nekubatana nemukoma wake Jonatani).
Peter Dinklage Kubata Vana Nhau Plus Untold Biography Facts: dzidzo
Sezvineiwo kurwa kwekutanga kwaPeter nekuzvigamuchira-kwake hakuna kumbokanganisa zvidzidzo zvake. Akafambira mberi nhanho yekudzidzira pamwe nevezera rake kubva kuchikoro chepuraimari kwaakange aine kuravira kwake kwekutanga kwemitambo nekutamba chinzvimbo chekutungamira mune imwe yemitambo yake yechikoro, 'Velveteen Rabbit'.
Achienda kune imwe Chikoro cheKaturike chechiKaturike chepp yevakomana, (Chikoro cheDelbarton) akaenderera mberi kupinda muchikwata chemutambo kusvikira apedza kudzidza kubva mu1987. Kuti azviise zvose kana kuti azadzise kururama kwose akaendesa kuBennington College yevadzidzi vepamusoro apo iye haana kungowedzera kuwirirana kweatatu asi akatakura chikamu mumutambo kubva kuchikoro.
Peter Dinklage Kubata Vana Nhau Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Akashongedzerwa neruzivo rwakakura uye akatsigirwa neyekoreji degree peter akaisa maseiri eNew York City kuti aite basa rekuita. Paaive aripo akatanga boka renguva pfupi yemitambo muBrooklyn muWilliamsburg asi chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka sezvaakange aronga.
Kukundikana kweboka rake remitambo kwakamuita kuti atarise pakuita basa rinoita (iro risina kukonzera kukanganisa kwomuviri wake chaiwo). Nemhaka yeiyo, Akaita chibvumirano chake nefirimu 'Oblivion' (1995) uye basa rake mumudhizimusi wefirimu harina kuenda kune imwe nzvimbo asi rakanyora kukoshesa kubudirira kwemafirimu nemamwe mafirimu anotevera 'Chiteshi Agent' izvo zvakamuisa muhuniro uye zvakaita kuti vanhu vamire uye vaone mu 2003.
Kurumidza kutsvaga 2011, kushanda kwake 'Mutambo wezvigaro zvoumambo' Akamupa mukana wekupa zvikwereti kusanganisira 'Inoshamisa Kubatsira Actor muDheteti yeDhiramu' '' Best Best Actor Actor - Series, Miniseries kana Television Film '' Mupembere Wechikwereti Wakawedzerwa Actor'.Golden Globe Awards ye "Best Actor Support uye" Empire Hero Award 'ne Empire Empire mu2015. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Peter Dinklage Kubata Vana Nhau Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Peter Dinklage munhu chaiye. Somugumisiro, zvakawanda hazvizivikanwi nezvehupenyu hwake hwehukama hwekare. Asi, zvakadaro, akavimbiswa kuna Erica Schmidt, dhigiridzi yemitambo, munaNovember 2004 uye akaroorana mu2005. Mukuwedzera, mapikicha emuchato wavo haana kuitwa pachena.
Nekuda kwekuzivikanwa kwake mukuchengeta hupenyu hwake hwakavanzika, zita remwana wake wekutanga pamwe nezita uye bonde remwana wake wechipiri (akazvarwa muna2017) harina kuziviswa. Zvirinani, isu tinoziva mwana wake wekutanga akazvarwa mu2011 musikana. Iye, zvakadaro, anoramba kuti zita rake ndi "Zelig".
Peter Dinklage Kubata Vana Nhau Plus Untold Biography Facts: Family Facts
Petro akakurira mumhuri ine rudo uye inotsigira. Tinokuunzira mashoko ezvemhuri yake.
Baba: John Carl Dinklage ndiye baba vemukurumbira mutambi. Aive nesitendi mukambani yeinishuwarenzi semutengesi weinishuwarenzi uye akashandawo semusoja achishanda saFirst Lieutenant muKorea kubva muna 1955 kusvika 1957. Akazvarwa Gumiguru 24, 1931, uye akafa musi waChikumi 27, 2004.
Amai: Diane Dinklage ndiye mudzidzi wechikoro chechikoro uye amai vaPeter Dinklage. Akanga ane rudo uye achibatsirana nevanakomana vake kuti Petro haambozeze kutora chikwereti kumudzimai wake nekumuita kuti ave nehutano hwakanaka hwehudiki pasinei nokuti akavakwa sei.
Hanzvadzi konama: Munun'una waPeter ndiJonathan Hayden Dinklage, nyanzvi yevhayorini, uyo akadonha achiridza kuridza violin. Nekuda kweizvozvo, haasi iye ane mukurumbira semukoma wake.
Kuratidzwa pasi apa mufananidzo waPeter, Amai vake nehanzvadzi.
Peter Dinklage Kubata Vana Nhau Plus Untold Biography Facts: Personality Facts
Peter anga ari muridzi wezvirimwa kubva pazera remakore gumi nematanhatu uye anozivikanwa zvakare kuve mutsigiri akasimba wekodzero dzeMhuka. Akapihwa zvikonzero zvekutsika nzira mbiri akatsanangura kuti:
“Ndinoda mhuka, mhuka dzese. Ini handingakuvadze kati kana imbwa - kana huku kana mhou. Uye ini handibvunze mumwe munhu kuti avarwadzise ini. Ndosaka ndiri munhu asingadyi nyama ”.
Iye anocherechedzawo zvinotevera nezvechido chake:
“Ndinopedza husiku hwangu ndakagara zvangu ndichiverenga bhuku nekunwa tii yangu nekufamba nembwa yangu. Izvo zvinonakidza sehupenyu hwangu. ”
Peter Dinklage Kubata Vana Nhau Plus Untold Biography Facts: Other Facts
Petro ane zvose imbwa uye mufambi wenja anonzi Kevin.
Iye ndewechizvarwa cheGermany, chiIrish, uye chiChirungu. Zita rake rinonzi German.
Kuti ararame chikoro chepamusoro aine 13-makore-ekuberekwa, Peter akazviona saWilliam Burroughs uye aive nehunhu hwekufananidza nehumwe hunhu.
Chimiro chaPeter chemazuva mashoma, achondroplasia, chinongogadzirisa marefu mapfupa mumakumbo nemakumbo
Ndiyo chete weAmerica akabatanidzwa nhengo yeMutambo weZigaro
CHOKWADI CHINOGONA: Vongai nekuverenga kwedu Peter Dinklage Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!